အန္တရာယ် ကင်းအောင် ဖုန်းကို ဘယ်လို အားသွင်းမလဲ ? - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > Android Tutorial > အန္တရာယ် ကင်းအောင် ဖုန်းကို ဘယ်လို အားသွင်းမလဲ ?
အန္တရာယ် ကင်းအောင် ဖုန်းကို ဘယ်လို အားသွင်းမလဲ ?
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 8:33 PM Android Tutorial
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် အခုပြောမှာတော့ ဒီနေ့ခေတ် တွင်ကျယ် အသုံးများတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကို အားသွင်းတဲ့ အခါမှာ ပေါက်ကွဲမှုလို မတော်တဆတွေ မဖြစ်ရအောင် အကောင်းဆုံးနဲ့ အန္တရာယ် အကင်းဆုံး ပုံစံ အားသွင်းနိုင်မယ့် အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတွေတင် မဟုတ်ပဲ Tabletတွေ အတွက်လည်း အခုပုံစံ အတိုင်း အသုံးပြု အားသွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ဈေးချိုတဲ့ အားသွင်းခေါင်းတွေကို မသုံးပါနဲ့ – ဈေးကွက်ထဲမှာ ကျပ်ထောင်ဂဏန်းလောက်နဲ့ ရနိုင်နေတဲ့ အားသွင်းခေါင်းတွေ ရှိပါတယ်။ စိတ်မချရပါဘူး။ သိန်းကျော်တန် ဖုန်းတလုံး အတွက်ရော မတော်တဆမှု ဖြစ်ခဲ့ရင် မိမိ ကိုယ်တိုင် အတွက်ရော ဈေးချိုပြီး အရည်အသွေး မကောင်းတဲ့ အားသွင်းခေါင်း ပြဿနာ အဖြစ် အခံပါနဲ့။ အရည်အသွေး အားနည်းတဲ့ အားသွင်းခေါင်းတွေဟာ မတော်တဆ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်နှုန်း များပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် မရွေးချယ်တတ်ရင် ကျွမ်းကျင်ဆိုင်မှာ မိမိဖုန်းကို ပြသပြီး သင့်လျော်မယ့် အားသွင်းခေါင်းကို ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း ၀ယ်ယူ အသုံးပြုပါ။
(၂) ဘက်စုံသုံး အားသွင်းခေါင်းသုံးမယ်ဆိုရင် စိတ်ချရတဲ့ ခေါင်းကို သုံးပါ – ဒီနေ့ခေတ် လူတစ်ယောက်မှာ အနည်းဆုံး စမတ်ဖုန်း ၁လုံးကနေ တချို့ဆိုရင် ဖုန်း၂ လုံး၊ ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းရော တက်ဘလက်ရော ရှိတတ်၊ သုံးတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဖုန်းတစ်လုံးချင်းစီ၊ စက်တခုချင်းစီ အတွက် အားသွင်းကြိုး တစ်ခုစီ သုံးရပါတယ်။ အဲဒီမှာ တချို့က ဘက်စုံသုံး အားသွင်းပေါင်းကို သီးသန့် ၀ယ်လိုက်တယ်၊ အဆိုပါ အားသွင်းခေါင်းနဲ့ပဲ ဖုန်းရော တက်ဘလက်ရော အားလုံးကို စုပြီး အားသွင်း အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ အဆိုပါ ဘက်စုံသုံး အားသွင်းခေါင်းက ပုံမှန် စက်တလုံးသွင်း အားသွင်းခေါင်းထက်ကိုပဲ အလုပ်ပို လုပ်လာရပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ဘက်စုံသုံး အားသွင်းခေါင်းသုံးသူတွေက အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ဈေးချိုတဲ့ အားသွင်းခေါင်းမျိုးတွေ အပြင် စိတ်မချရတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေရဲ့ အားသွင်းခေါင်းတွေကိုပင် မသုံးတာ အကောင်းဆုံးပါ။ အရည်အသွေးမြင့် ဘက်စုံသုံး အားသွင်းခေါင်းကို သုံးပါ။
(၃) မူလကုမဏီထုတ် အားသွင်းခေါင်းက စိတ်အချရဆုံးပါ – အချို့သော စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်ထုတ် ကုမဏီတွေက ကုမဏီထုတ် မော်ဒယ်တွေ အတွက် နောက်ထပ် အပို အားသွင်းခေါင်းတွေကိုပါ ထုတ်လုပ်ရောင်းချတတ်သလို တချို့ကလည်း ဘယ်လို အားသွင်းခေါင်းကို အစားထိုး သုံးနုိင်တယ်လို့ လမ်းညွှန်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို လမ်းညွှန်ထားတဲ့ အားသွင်းခေါင်း ဒါမှမဟုတ် မူလ ကုမဏီထုတ် အားသွင်းခေါင်းကို အသုံးပြုတာ အကောင်းဆုံးပါ။
(၄) ဖုန်းအားသွင်းချိန်မှာ ဖုန်းကို ဖုံးအုပ်ထားမှု မရှိပါစေနဲ့ – ကျွန်တော်တို့ တခါတလေမှာ ဖုန်းအားသွင်းရင်း မီးလောင်တာတွေ၊ ပေါက်ကွဲတဲ့ သတင်းတွေ ကြားဖူးကြပါတယ်။ အားသွင်းခေါင်း ကောင်းတာ သုံးတဲ့ အပြင် အားသွင်းနေချိန်မှာ ဖုန်းအပေါ်မှာ ဘာနဲ့မှ ဖုံးအုပ်ထားမိတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ဖုန်းအားသွင်းချိ်န်မှာ ဖုန်းကနေ အပူလှိုင်းထွက်ရှိ်ပြီး အဆိုပါ ဖုံးအုပ်မိထားစေတဲ့ အနေအထားက ဖုန်းကို အပူချိန်တက် ပိုမြန်စေပါတယ်။ ပေါက်ကွဲ မီးလောင်မှု ဖြစ်စေဖို့ ရာခိုင်နှုန်း များစေပါတယ်။ အားသွင်းချိန် ဖုန်းကို ပြင်ပလေနဲ့ ထိတွေ့နေပါစေ၊ အပူပျံ့နှံ့မှု ကောင်းစေပြီး အပူချိန်တက်နှေးစေ၊ အေးမြနေစေပါတယ်။
(၅) ညလုံးပေါက် အားသွင်းအိပ်ခြင်းမျိူး မလုပ်ပါနဲ့ – အားသွင်းခေါင်း မကောင်းတာတွေကြောင့် ညလုံးပေါက် ဖုန်းအားသွင်းပြီး အိပ်တတ်သူတွေမှာ ဖုန်းအားသွင်းရင်း မီးလောက်မှု ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းက ဘက်ထရီ အားပြည့်သွားသည့်တိုင်အောင် အားသွင်းခေါင်းက အားဆက်စီးနေစေပြီး ဘက်ထရီ အပူချိန် တက်လာသလို မီးလောင်မှု ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ညလုံးပေါက် ဖုန်းအားသွင်းအိပ်တဲ့ အကျင့် မလုပ်ပါနဲ့။
(၆) အားသွင်းခေါင်းမှာ ပြစ်ချက်ရှိသလား စစ်ဆေး အသုံးပြုပါ – အားသွင်းကြိုးစ ပေါက်နေ၊ ဖွာထွက်နေတာတွေ ရှိသလား၊ ခေါင်းတွေက မိလိုက် မမိလိုက် ဖြစ်နေသလား၊ အားသွင်းခေါင်းမှာရော အက်နေတာတွေ၊ ခိုက်မိထားတာတွေ ရှိလား စစ်ဆေးပါ။ ထိခိုက်မှု ရှိထားတဲ့ အားနည်းချက်နဲ့ အားသွင်းခေါင်းက မီးလောင်မှု ဖြစ်စေဖို့ အခြေအနေ များစေပါတယ်။ တခါတရံ လျှပ်ကူးလို့ ဓါတ်လိုက်တာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
(၇) အထိုင် အားသွင်းပေါက်တစ်ခုတည်းမှာ ပြုံပြီး အားမသွင်းပါနဲ့ – အားသွင်းစရာ ပင်မ လျှပ်စစ်ပေါက် နည်းနေတဲ့ နေရာတွေမှာ ပြုံပြီး ရှိတဲ့ အားသွင်းပေါက်မှာတင် စုံပြီး အားသွင်းတတ်ကြတာ တွေ့ဖူးပါတယ်။ အဆိုပါ အထိုင် တစ်ခုတည်းကနေ ဖုန်း၊ တက်ဘလက် အများအပြားစုပြီး အားမသွင်းပါနဲ့။ လျှပ်စစ် အထိုင်ခုံ တခုံဟာ အများဆုံး 13 ampsအထိပဲ သုံးသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါနှုန်းထက် ပိုမသုံးပါနဲ့။
အန်တရာယျ ကငျးအောငျ ဖုနျးကို ဘယျလို အားသှငျးမလဲ ?
[Unicode]ဖတျရနျ အခုပွောမှာတော့ ဒီနခေ့တျေ တှငျကယျြ အသုံးမြားတဲ့ စမတျဖုနျးတှကေို အားသှငျးတဲ့ အခါမှာ ပေါကျကှဲမှုလို မတျောတဆတှေ မဖွဈရအောငျ အကောငျးဆုံးနဲ့ အန်တရာယျ အကငျးဆုံး ပုံစံ အားသှငျးနိုငျမယျ့ အခကျြတှေ ဖွဈပါတယျ။ စမတျဖုနျးတှတေငျ မဟုတျပဲ Tabletတှေ အတှကျလညျး အခုပုံစံ အတိုငျး အသုံးပွု အားသှငျးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
(၁) ဈေးခြိုတဲ့ အားသှငျးခေါငျးတှကေို မသုံးပါနဲ့ – ဈေးကှကျထဲမှာ ကပျြထောငျဂဏနျးလောကျနဲ့ ရနိုငျနတေဲ့ အားသှငျးခေါငျးတှေ ရှိပါတယျ။ စိတျမခရြပါဘူး။ သိနျးကြျောတနျ ဖုနျးတလုံး အတှကျရော မတျောတဆမှု ဖွဈခဲ့ရငျ မိမိ ကိုယျတိုငျ အတှကျရော ဈေးခြိုပွီး အရညျအသှေး မကောငျးတဲ့ အားသှငျးခေါငျး ပွဿနာ အဖွဈ အခံပါနဲ့။ အရညျအသှေး အားနညျးတဲ့ အားသှငျးခေါငျးတှဟော မတျောတဆ ပေါကျကှဲမှု ဖွဈနှုနျး မြားပါတယျ။ ကိုယျတိုငျ မရှေးခယျြတတျရငျ ကြှမျးကငျြဆိုငျမှာ မိမိဖုနျးကို ပွသပွီး သငျ့လြျောမယျ့ အားသှငျးခေါငျးကို ညှနျကွားခကျြ အတိုငျး ဝယျယူ အသုံးပွုပါ။
(၂) ဘကျစုံသုံး အားသှငျးခေါငျးသုံးမယျဆိုရငျ စိတျခရြတဲ့ ခေါငျးကို သုံးပါ – ဒီနခေ့တျေ လူတဈယောကျမှာ အနညျးဆုံး စမတျဖုနျး ၁လုံးကနေ တခြို့ဆိုရငျ ဖုနျး၂ လုံး၊ ဒါမှမဟုတျဖုနျးရော တကျဘလကျရော ရှိတတျ၊ သုံးတတျကွပါတယျ။ အဲဒီမှာ ဖုနျးတဈလုံးခငျြးစီ၊ စကျတခုခငျြးစီ အတှကျ အားသှငျးကွိုး တဈခုစီ သုံးရပါတယျ။ အဲဒီမှာ တခြို့က ဘကျစုံသုံး အားသှငျးပေါငျးကို သီးသနျ့ ဝယျလိုကျတယျ၊ အဆိုပါ အားသှငျးခေါငျးနဲ့ပဲ ဖုနျးရော တကျဘလကျရော အားလုံးကို စုပွီး အားသှငျး အသုံးပွုလရှေိ့ပါတယျ။ အဲဒီမှာ အဆိုပါ ဘကျစုံသုံး အားသှငျးခေါငျးက ပုံမှနျ စကျတလုံးသှငျး အားသှငျးခေါငျးထကျကိုပဲ အလုပျပို လုပျလာရပါတယျ။ ဒီ့အတှကျ ဘကျစုံသုံး အားသှငျးခေါငျးသုံးသူတှကေ အထကျမှာ ပွောခဲ့တဲ့ ဈေးခြိုတဲ့ အားသှငျးခေါငျးမြိုးတှေ အပွငျ စိတျမခရြတဲ့ အမှတျတံဆိပျတှရေဲ့ အားသှငျးခေါငျးတှကေိုပငျ မသုံးတာ အကောငျးဆုံးပါ။ အရညျအသှေးမွငျ့ ဘကျစုံသုံး အားသှငျးခေါငျးကို သုံးပါ။
(၃) မူလကုမဏီထုတျ အားသှငျးခေါငျးက စိတျအခရြဆုံးပါ – အခြို့သော စမတျဖုနျး၊ တကျဘလကျထုတျ ကုမဏီတှကေ ကုမဏီထုတျ မျောဒယျတှေ အတှကျ နောကျထပျ အပို အားသှငျးခေါငျးတှကေိုပါ ထုတျလုပျရောငျးခတြတျသလို တခြို့ကလညျး ဘယျလို အားသှငျးခေါငျးကို အစားထိုး သုံးနိုငျတယျလို့ လမျးညှနျထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ ဒီလို လမျးညှနျထားတဲ့ အားသှငျးခေါငျး ဒါမှမဟုတျ မူလ ကုမဏီထုတျ အားသှငျးခေါငျးကို အသုံးပွုတာ အကောငျးဆုံးပါ။
(၄) ဖုနျးအားသှငျးခြိနျမှာ ဖုနျးကို ဖုံးအုပျထားမှု မရှိပါစနေဲ့ – ကြှနျတျောတို့ တခါတလမှော ဖုနျးအားသှငျးရငျး မီးလောငျတာတှေ၊ ပေါကျကှဲတဲ့ သတငျးတှေ ကွားဖူးကွပါတယျ။ အားသှငျးခေါငျး ကောငျးတာ သုံးတဲ့ အပွငျ အားသှငျးနခြေိနျမှာ ဖုနျးအပျေါမှာ ဘာနဲ့မှ ဖုံးအုပျထားမိတာမြိုး မဖွဈပါစနေဲ့။ ဖုနျးအားသှငျးခြိနျမှာ ဖုနျးကနေ အပူလှိုငျးထှကျရှိပွီး အဆိုပါ ဖုံးအုပျမိထားစတေဲ့ အနအေထားက ဖုနျးကို အပူခြိနျတကျ ပိုမွနျစပေါတယျ။ ပေါကျကှဲ မီးလောငျမှု ဖွဈစဖေို့ ရာခိုငျနှုနျး မြားစပေါတယျ။ အားသှငျးခြိနျ ဖုနျးကို ပွငျပလနေဲ့ ထိတှနေ့ပေါစေ၊ အပူပြံ့နှံ့မှု ကောငျးစပွေီး အပူခြိနျတကျနှေးစေ၊ အေးမွနစေပေါတယျ။
(၅) ညလုံးပေါကျ အားသှငျးအိပျခွငျးမြိူး မလုပျပါနဲ့ – အားသှငျးခေါငျး မကောငျးတာတှကွေောငျ့ ညလုံးပေါကျ ဖုနျးအားသှငျးပွီး အိပျတတျသူတှမှော ဖုနျးအားသှငျးရငျး မီးလောကျမှု ပိုဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဖုနျးက ဘကျထရီ အားပွညျ့သှားသညျ့တိုငျအောငျ အားသှငျးခေါငျးက အားဆကျစီးနစေပွေီး ဘကျထရီ အပူခြိနျ တကျလာသလို မီးလောငျမှု ဖွဈလာစနေိုငျပါတယျ။ ညလုံးပေါကျ ဖုနျးအားသှငျးအိပျတဲ့ အကငျြ့ မလုပျပါနဲ့။
(၆) အားသှငျးခေါငျးမှာ ပွဈခကျြရှိသလား စဈဆေး အသုံးပွုပါ – အားသှငျးကွိုးစ ပေါကျနေ၊ ဖှာထှကျနတောတှေ ရှိသလား၊ ခေါငျးတှကေ မိလိုကျ မမိလိုကျ ဖွဈနသေလား၊ အားသှငျးခေါငျးမှာရော အကျနတောတှေ၊ ခိုကျမိထားတာတှေ ရှိလား စဈဆေးပါ။ ထိခိုကျမှု ရှိထားတဲ့ အားနညျးခကျြနဲ့ အားသှငျးခေါငျးက မီးလောငျမှု ဖွဈစဖေို့ အခွအေနေ မြားစပေါတယျ။ တခါတရံ လြှပျကူးလို့ ဓါတျလိုကျတာမြိုးတှလေညျး ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
(၇) အထိုငျ အားသှငျးပေါကျတဈခုတညျးမှာ ပွုံပွီး အားမသှငျးပါနဲ့ – အားသှငျးစရာ ပငျမ လြှပျစဈပေါကျ နညျးနတေဲ့ နရောတှမှော ပွုံပွီး ရှိတဲ့ အားသှငျးပေါကျမှာတငျ စုံပွီး အားသှငျးတတျကွတာ တှဖေူ့းပါတယျ။ အဆိုပါ အထိုငျ တဈခုတညျးကနေ ဖုနျး၊ တကျဘလကျ အမြားအပွားစုပွီး အားမသှငျးပါနဲ့။ လြှပျစဈ အထိုငျခုံ တခုံဟာ အမြားဆုံး 13 ampsအထိပဲ သုံးသငျ့ပါတယျ။ အဆိုပါနှုနျးထကျ ပိုမသုံးပါနဲ့။
အန္တရာယ် ကင်းအောင် ဖုန်းကို ဘယ်လို အားသွင်းမလဲ ? Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:33 PM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် အခုပြောမှာတော့ ဒီနေ့ခေတ် တွင်ကျယ် အသုံးများတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကို အားသွင်းတဲ့ အခါမှာ ပေါက်ကွဲမှုလို မတော်တဆတွေ မဖြစ်ရအေ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:33 PM